Ukufihla Okuthokomele Enhliziyweni ye-Lancaster - I-Airbnb
Ukufihla Okuthokomele Enhliziyweni ye-Lancaster
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Elam
U-Elam uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Ngaphandle kwenkabazwe yase-Lancaster City, leli fulethi lasekhaya elihlangene likunikeza ukufinyelela okulula kokubili ezindaweni ezithandwayo zedolobha nezasemaphandleni. Kuwuhambo lwezinyawo lwemizuzu engu-10 oluya ezitolo, amathilomu, i-Central Market, i-Gallery Row, i-Marriott, kanye ne-Conference Center. Ilungele abantu abashadile abavakashayo, ukumisa ibhizinisi, noma ukushaywa wumoya nabangane. Umgomo wami uwukuhlinzeka ngokokuzithokozisa okuhle kakhulu edolobheni ngezinye izikhathi elaziwa ngokuthi "i-Little Brooklyn."
Indawo ihlanganisa indawo yokungena eseceleni ebiyelwe, ikamelo lokulala elinombhede olala umuntu oyedwa/olala abantu ababili, indlu yokugezela ephelele, nendawo yokuhlala enosofa ophinde ube umbhede. Indawo etholakalayo endaweni yokuphumula ikunikeza usinki, i-toaster oven, i-microwave, umshini wokwenza ikhofi, kanye nesiqandisi esincane.
4.77 · 341 okushiwo abanye
Lapha edolobheni lase-Lancaster City, kumatasa, kodwa kumnandi kakhulu (futhi kulula)! Phakathi nebanga elilula lokuhanjwa ngezinyawo, uzokwazi ukufinyelela:
- isitolo esiphelele sokudla
- izindawo zokudlela namathilomu
- Imakethe Ephakathi
- Igalari Row
Lancaster Marriot - Lancaster Convention Center
Ezinye izindawo ezithandwayo eziseduze:
- I-Clipper Stadium
- Franklin ne-Marshall College
Silapha ukuze sikunikeze ukuhlala okuhle nokukhumbulekayo. Sikude nomlayezo kuphela. Sihlala eduze futhi siyakwazi ukuphendula ngokushesha uma unemibuzo noma uma kuvela izinkinga.
SICELA USEBENZISE UHLELO LOKUSEBENZA UKUZE UXHUMANE. (Sivamise ukuba lapho ohlelweni lokusebenza.) OKUNYE SINGENZA SINGASABILI.
Silapha ukuze sikunikeze ukuhlala okuhle nokukhumbulekayo. Sikude nomlayezo kuphela. Sihlala eduze futhi siyakwazi ukuphendula ngokushesha uma unemibuzo noma uma kuvela izinkinga…
Izilimi: English, Deutsch, Bahasa Indonesia